Taliyaha ciidanka Booliska Puntland oo Muqdisho gaaray | RBC Radio
Taliyaha ciidanka Booliska Puntland oo Muqdisho gaaray
Posted on April 20, 2014 Raad Raaca, RBC, Wararka
Muqdisho[RBC Radio]Magaalada Muqdisho,waxaa gaaray wafti ballaaran oo u hoggaaminayo taliyaha ciidanka booliska dowladda Puntland Jen.Maxamed Siciid Jaqanaf,waxaan maanta ay ka ambabaxen magaalada caasumada ah ee Garoowe.
Taliyaha socdalka Muqdisho uu ku tagay waxaa ku waheliya saraakil ciidan oo ay qeyb ka yihiin Taliska Darawiishta,Hay’adda Miino-baarista,Hay’adda PIA iyo wasaradda Amniga.
Ujeeddada socdalka waxaa lugu sheegay waftigu inuu ka qeyb-galayo shir maanta ka furmay Muqdisho oo looga hadlayo amniga dalka,waxaana shirka lugu casumay maamullada dalka ka jira iyo mas’uuliyinta gobollada dalka.
Warar ay warbaahintu baahisay qar keed ayaa lugu sheegay qorshuhu inuu ahaa shirka inuu ka qeyb-galo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland,balse maadaama an wali la xalin khilafka ka dhex-taagan dowladda faderaalka iyo Puntland,waxaa la sheegay inuu baajiyey taas badalkeedana taliyaha ciidanka booliska iyo saraakil kale ay dowladdu dirtay.
Shirka qaran ee amniga dalka looga hadlayo,waxaa la sheegay in dhowrka maalin ee ina soo aadan uu socon doonno,marka uu soo dhammaadana laga soo saari doonno war-murtiyed looga hadlo waxii ka soo baxay.
3 Responses to Taliyaha ciidanka Booliska Puntland oo Muqdisho gaaray
Gaas ma la hubaa in uusan damjadiid inuusan ka tirsaneen
Malahubaa gaas iyo wsirka waxbarashada damujadiid